ဝန်ဆောင်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင် Angie's List ပါရမည် Martech Zone
ဝန်ဆောင်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင် Angie's List ပါရမည်
အင်္ဂါနေ့, ဇူလိုင်လ 31, 2012 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
နှုတ်ဖြင့်ပြောသောစကား အပြုသဘောဆောင်သည့်အမှတ်တံဆိပ်ပုံရိပ်ဖော်ဆောင်ခြင်းနှင့် ၀ ယ်ယူခြင်းသို့ ၀ င်ခြင်း၊ ၀ က်ဘ်တွင်ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များရှိသည်။ အများစုမှာပြိုင်ဘက်များနှင့်မှားယွင်းသောသုံးသပ်ချက်များကြောင့်ပြproblemနာဖြစ်လာသည့်အမည်မသိအသုံးပြုသူများကိုပွင့်လင်းစေသည်။ ဤဆိုဒ်များမှာ သင့်ရဲ့ဂုဏ်သတင်းကိုဖျက်ဆီးဖို့မျှော်လင့်ပြိုင်ဘက်များကလွှမ်းမိုး.
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုသည်မည်မျှကွာခြားကြောင်းသိရသောအခါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှအံ့အားသင့်ကြသည်။ Angie ၏စာရင်းအချစ် Angie's List တွင်သင်၏ စီးပွားရေးအကောင့်ကအခမဲ့ပါ။ သင်၏ဂုဏ်သတင်းသည် ၁.၅ သန်းသောခိုင်မာသောသုံးစွဲသူအခြေပြုအခြေစိုက်စခန်းမှတည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းတို့အားလုံးသည်မှတ်ပုံတင်ပြီးများသောအားဖြင့်ပေးရသောစာရင်းပေးသွင်းသူများဖြစ်ပြီးအတုအယောင်သို့မဟုတ်ဘက်လိုက်မှုမရှိသောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများ၏အခွင့်အလမ်းများကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ Angie's List သည်ပြissuesနာများကိုတိကျမှန်ကန်စွာအစီရင်ခံနိုင်ရန်အတွက်ဖျန်ဖြေခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုသည်အသုံးပြုသူများအတွက်အလွန်လူကြိုက်များလာပြီးလူတို့သည်မကြာခဏရှာဖွေလေ့ရှိသည် Angie ၏စာရင်း + ဝန်ဆောင်မှုနှင့်မြို့!
Angie's List သည်အိမ်ခေါင်မိုး၊ ရေပိုက်သမား၊ အိမ်သန့်ရှင်းရေးနှင့်သွားဆရာဝန်များကဲ့သို့အမျိုးအစား ၅၅၀ ကျော်ရှိကန်ထရိုက်တာများနှင့်ဆရာဝန်များအပေါ်ယုံကြည်စိတ်ချရသောပြန်လည်သုံးသပ်မှုများကိုနိုင်ငံ၏အဓိကပံ့ပိုးပေးသူဖြစ်သည်။ အသင်း ၀ င်ပေါင်း ၂ သန်းကျော်သည် Angie's List ကိုစစ်ဆေးပြီး၊ အကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကိုရှာဖွေရန်နှင့်သီးသန့်အသင်း ၀ င်အထူးလျှော့စျေးများဖြင့်စီမံချက်များကိုသိမ်းဆည်းရန်ဖြစ်သည်
Angie ၏စာရင်း ကုမ္ပဏီတစ်ခုစီအတွက်စာမျက်နှာတစ်ခုဖွင့်ပြီးကုမ္ပဏီအတွက် F ကဒ်တန်းကိုအစီရင်ခံစာကဒ်ပုံစံသတ်မှတ်ပေးသည်။ စျေးနှုန်း၊ အရည်အသွေး၊ တုန့်ပြန်မှု၊ တိကျမှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် ၀ န်ဆောင်မှုက ၀ ယ်သူများကိုအားပေးသည်။ အဆင့်များသည်ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၏စုစုပေါင်းကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ဖြစ်ရန်ငွေမပေးနိုင်ပါ Angie ၏စာရင်း သို့မဟုတ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုမည်သည့်နည်းနှင့်မဆိုလွှမ်းမိုးနိုင်သည်၊ သို့သော်မှတ်ပုံတင်ခြင်းသည်သင့်အားအီးမေးလ်သတိပေးချက်များရရှိရန်ခွင့်ပြုသည် -
စတိုးအသွင်အပြင်တစ်ခုဖန်တီးပါ ဖောက်သည်များအားဆွဲဆောင်သော ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်လျှော့စျေးများကိုစီးပွားရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်၊
သင့်ရဲ့ကြီးမြတ် ratings မြှင့်တင်ရန် သူတို့အောင်မြင်ကြသည်တခါ!
အလွန်ကြီးစွာသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်အတူ Angie ၏စာရင်း သင်တို့ကိုလည်းခွင့်ပြု အပေးအယူဖြန့်ဝေ ရပ်ရွာကိုရန်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Angie ၏စာရင်း ယုံကြည်စိတ်ချရသည့်ရင်းမြစ်ဖြစ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ပြတ်ပြတ်သားသားဖြစ်သောကြောင့်စစ်မှန်သောဖောက်သည်များ၏တိကျသောပြန်လည်သုံးသပ်မှုများမှသင်၏ကုမ္ပဏီအကျိုးကျေးဇူးခံစားရလိမ့်မည်။ သင်အလုပ်လုပ်သည်နှင့်အမျှသင်၏ဖောက်သည်များကိုသင့်ကုမ္ပဏီ၏ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များကို Angie's List တွင်ပြုလုပ်ရန်သင့်အားပိုမိုကောင်းမွန်သောအဆင့်များနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသင့်လမ်းအတိုင်းမောင်းနှင်နိုင်ရန်ပြုလုပ်ပေးသင့်သည်။ သင်အရှိန်အဟုန်ရနေသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သော Angie's List ၏အရောင်းအ ၀ ယ်နှင့်မဂ္ဂဇင်းကြော်ငြာများကိုသေချာအသုံးချပါ။ ထိုတွင်ကြော်ငြာရန်ခွင့်ပြုထားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးယုံကြည်မှုရှိသောကြောင့်အသိုင်းအဝိုင်းသည်အရောင်းအ ၀ ယ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးအလွန်ဆိုးဝါးလှသည်။
၎င်းတို့၏ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် ပတ်သက်၍ အလေးအနက်ထားသောမည်သည့်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းမဆို Angie's List တွင် ၄ င်းတို့၏တည်ရှိမှုကိုစီမံပြီးမြှင့်တင်သင့်သည်။ ဒီနေ့မှတ်ပုံတင်ပါ!
Tags: Angie ၏စာရင်းဒေါသဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအွန်လိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းreviews
Buddy Media နှင့် Salesforce Marketing Cloud